Induction Heat Kurapa Kumusoro Maitiro-chii chinonzi kupisa kupisa kurapa?
Chii chinonzi kupisa kupisa kurapa pamusoro pechinhu?
Induction Kutya kupisa kupisa nzira inobvumidza kwakanyanya kunopisa simbi ne electromagnetic induction. Maitiro acho anovimba nemasaisai emagetsi emagetsi mukati mezvinhu kuti abudise kupisa uye ndiyo nzira inosarudzika inoshandiswa kusunga, kuomesa kana kupfava simbi kana zvimwe zvinhu zvinoitisa. Mune ano maitiro ekugadzira, iyi fomu yekurapa kupisa inopa musanganiswa unobatsira wekumhanya, kuenderana uye kutonga. Kunyangwe hazvo zviga zvekutanga zvichizivikanwa, kufambira mberi kwazvino muhunyanzvi hwetekinoroji kwakaita kuti maitiro acho ave nyore, inodhura-nzira yekudziisa nzira yekushandisa iyo inosanganisira kujoina, kurapa, kupisa uye kuyedza zvinhu.
Induction kupisa kurapa, kuburikidza nekunyanyisa kudzora mashandisirwo emagetsi anopisa coil, inokutendera iwe kuti usarudze akanakisa maitiro epanyama kwete kwete yega yega simbi chikamu-asi chechikamu chimwe nechimwe pane icho simbi chikamu. Induction kuomesa kunogona kupa kusimba kwakasimba mukutakura magazini uye shaft zvikamu pasina kupira iyo ductility inofanirwa kubata kutyisa mitoro uye kudedera. Unogona kuomesa nzvimbo dzekutakura dzemukati uye zvigaro zvevharuvhu munzvimbo dzakaomarara pasina kugadzira matambudziko ekukanganisa. Izvi zvinoreva kuti iwe unokwanisa kuomesa kana kuwedzera nzvimbo chaidzo dzekusimba uye ductility munzira dzinogona kunyatso shandira zvaunoda.
Zvakanakira Induction Heat Kurapa Services
Yakananga Kupisa Kurapa Kuomarara kwepamusoro kunochengetedza chekutanga ductility yepakati nepo ichiomesa yakakwira yekupfeka nzvimbo yechikamu. Iyo yakaoma nzvimbo inodzorwa nenzira kwayo maererano nehuremu hwemakesi, hupamhi, nzvimbo uye kuomarara.
Optimised Consistency Bvisa kusagadzikana uye zvemhando yepamusoro zvine chekuita nemoto wakashama, kudziyisa mwenje nedzimwe nzira. Kana iyo system yakanyatsogadziriswa uye kuseta, hapana zvekufungidzira basa kana musiyano; iyo yekudziya pateni inodzokororwa uye inowirirana. Nemazuva ano solid state masisitimu, chaiwo tembiricha kudzora inopa yunifomu mhedzisiro.
Maximized Chigadzirwa Mitengo yekugadzira inogona kukwidziridzwa nekuti kupisa kunogadzirwa chaiko uye ipapo (> 2000º F. mu <1 sekondi) mukati mechikamu. Kutanga kuri kuita ipapo ipapo; hapana kudziya kana kutonhora pasi kutenderera kunodiwa.
Yakavandudzwa Chigadzirwa Zvikamu hazvimbofi zvakabatana zvakananga nemurazvo kana chimwe chinhu chinopisa; kupisa kunoitwa mukati mechikamu pachawo nekuchinjisa magetsi emagetsi. Nekuda kweizvozvo, chigadzirwa warpage, kumonyanisa uye kuramba mareti anoderedzwa.
Kuderedzwa Kwemagetsi Simba Wakaneta nekuwedzera mashandisiro emabhiri? Iyi yakasarudzika simba-inoshanda maitiro inoshandura kusvika ku90% yesimba rinoshandisa simba kuita kupisa kunobatsira; mabheji emabhureki anowanzo kuve chete 45% magetsi-anoshanda. Hapana anodziya-kumusoro kana anotonhorera-pasi macircuit anodikanwa saka kumira-nekupisa kurasikirwa kunoderedzwa kusvika kushoma kushoma.
Zvakakomberedza Ruzha Kupiswa kwemafuta echinyakare hazvina basa, kuchikonzera nzira yakachena, isingasvibise iyo inobatsira kuchengetedza nharaunda.
Induction Heating inzira isingabatike yekudziya yemiviri, iyo inonaya simba kubva kune Imwe Inochinjisa Magineti Munda, inogadzirwa neInduction Coil (Inductor)
Pane nzira mbiri dzekugadziriswa kwemagetsi:
chizvarwa chepedyo-chiuno (eddy) mafungu mukati memuviri izvo zvinoita kupisa nekuda kwemagetsi kuramba kwechinhu chemuviri
hysteresis kudziyisa (kwemagineti zvigadzirwa CHETE!) nekuda kwekukweshera kwemagineti madiki mavhoriyamu (madomeni), ayo anotenderera anotevera kutarisisa kwekunze magnetic field
Nheyo yeInduction Heating
Induction kupisa magetsi inopa yazvino (I1) kune induction coil
Coil currents (ampere-anotendeuka) inogadzira magineti. Mitsara yemunda inogara yakavharwa (mutemo wezvakasikwa!) Uye tambo yega yega inotenderera iko iko iko iko sosi - coil inotendeuka uye yekushandira
Kusiyanisa magineti inoyerera kuburikidza nechikamu chemuchinjikwa-chikamu (chakabatanidzwa kuchikamu) chinokonzera magetsi muchikamu
Yakagadziriswa magetsi inogadzira eddy currents (I2) muchikamu chinoyerera chakanangana chakanangana neiyo coil yazvino pazvinogoneka
Eddy currents inogadzira kupisa muchikamu
Simba Kuyerera muInduction Heating Kuisirwa
Kuchinjanisa zvazvino shanduko nzira kaviri panguva yega yega frequency kutenderera Kana frequency iri 1kHz, zvazvino shanduko inonongedzera ka2000 sekondi.
Chigadzirwa chazvino nemagetsi chinopa kukosha kwesimba pakarepo (p = ixu), inozungunuka pakati pesimba remagetsi uye coil. Tinogona kutaura kuti simba riri kunyudzwa muchikamu (Active Power) uye zvishoma zvinoratidzwa (Reactive Power) neiyo coil. Capacitor bhatiri inoshandiswa kuburitsa jenareta kubva pasimba rinoshanda. MaCapacitors anogashira simba reactive kubva kuoil uye ndokutumira iyo kumashure kune iyo coil inotsigira oscillations.
Dunhu "coil-transformer-capacitors" inonzi Resonant kana Tank Circuit.
Categories FAQ, Technologies Tags kupisa kurapa, kupisa kurapa induction, kupisa kurapa sevhisi, kupisa kurapwa, kupisa kupisa, HF kupisa kurapa, yakakwira frequency kupisa kurapa, yakakwira frequency kupisa kurapwa, intion heat heat treatment, induction kupisa kurapa maitiro, kupisa kwepamusoro kurapa, pamusoro kupisa kupisa Post navigation